“हिसिला र म जस्ता इन्जिनियरलाई चोरेर आठ कक्षा पास गरेकाले भ्रष्टाचारी भन्ने?” – Dainik Sangalo
“हिसिला र म जस्ता इन्जिनियरलाई चोरेर आठ कक्षा पास गरेकाले भ्रष्टाचारी भन्ने?”
October 11, 2020 336
काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू र आफ्नी पत्नी माथि बेकार भ्रष्टाचारको आरोप लगाइने गरेको बताएका छन्। केहि दिन अगाडी गृहजिल्ला गोरखा पुगेका बेला भट्टराईले आफू र आफ्नी पत्नी माथि बेकार भ्रष्टाचारको आरोप लगाइने गरेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरुले आफू माथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन नसुहाउने उनले बताए।
केहि उपाय नलागेपछि आफूलाई छाडेर हिसिला यमी माथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइने गरेको भट्टराईको भनाई छ। हिसिला सम्पन्न परिवारबाट रहेको हुँदा उनले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था नहुने उनले जिकिर गरे।
‘दाइलाई सकिन भाउजीलाई भन्या जस्तो केहि नपाएर हिसिलाको बद्नाम गर्न खोजे’,उनले भने,’हिसला आफैं सम्पन्न परिवारकी मान्छे। सँगै इन्जिनियर, नक्सा कोरेरै पुग्छ। किन भ्रष्टाचार गर्नुपर्यो। चिट चोरेर आठ कक्षा पास गर्नेहरु र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले हामीलाई भ्रष्टाचारी भन्ने ?
Prevदसैँ नबनाेस् दसा : काेराेना छल्न डा. शेरबहादुर पुनका महत्त्वपूर्ण टिप्स थप सामग्री ….
Nextभारतको अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्ने अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम फिल्ममा आखिर के छ ?
सुष्मा कार्कीसँग मध्यरातमा नाइट क्लबमा भेटिए भुवन केसी